के हो बालबालिकामा देखिएको मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमटरी सिन्ड्रोम ? - Kohalpur Trends
के हो बालबालिकामा देखिएको मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमटरी सिन्ड्रोम ?
२६ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरको एक परिवारका सबै सदस्यलाई वैशाख तेस्रो साता कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । १४ दिन होम आइसोलेसनमा बसे, तीन वर्षको छोरासहित सबै संक्रमण मुक्त भए ।
यो लक्षण हालैमात्र पत्ता लगेकाले विस्तृत जानकारी भने आएको छैन । थप अध्ययनको जरुरी रहेको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । तर कोरोना भाइरस संक्रमित वा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकामा देखिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कस्तो छ बालबालिकालाई कोरोनाबाट बचाउने तयारी ?
Previous Previous post: भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा बालबालिका धेरै संक्रमित भएका हुन् ?
Next Next post: प्रदेश २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कांग्रेसका तीन मन्त्रीले लिए सपथ